अग्नि सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार बनाउने नेकपाको निर्णय::Daily Newspaper of Nepal
५ माघ २०७६, आईतवार १२:३७
अग्नि सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार बनाउने नेकपाको निर्णय
काठमाडौँ(जस)–सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निणर्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बेलुका बसेको (नेकपा) सचिवालयको बैठकले सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागी राजीनामा दिएपछि विगत चार महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त रहँदै आएको छ । सभामुख नहुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित हुँदै आएको छ । नेकपाको आइतबारको निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाले नयाँ सभामुख पाउने भएको छ । आइतबार बिहान पार्टी अध्यक्षयद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको सहमतिका आधारमा सचिवालय बैठकले सापकोटालाई सभामुखमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो ।
तत्कालीन सभामुख महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र लामो छलफल भएको थियो । यही पुस ४ गतेदेखि शुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भइरहेको थियो । महासचिव पौडेलले बैठकपछि सचिवालयले एक मतका साथ सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले भने, “उपसभामुखका सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडिको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुहुने हाम्रो अपेक्षा छ ।”
विसं २०१५ फागुन १४ गते सिन्धुपाल्चोकको कुभिण्डेमा जन्मेका सापकोटाले १५ वर्ष अध्यापन गरेका थिए । नेता सापकोटा विसं २०३५ मा नेकपा (चौथो महाधिवेशन) बाट पार्टी राजनीतिमा लागेका हुन् । हाल नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका सापकोटा २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
विसं २०६८ मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका सापकोटा २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि सिन्धुपाल्चोक–२ बाट दोस्रोपटक संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । सापकोटाले २०७३ मा नेपाल सरकारको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
विसं २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सापकोटा २०४८ सालदेखि सक्रियरूपमा राजनीतिमा क्रियाशील छन् । विसं २०५१ मा तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र) को केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०५१ असोजमा नेकपा (माओवादी) केन्द्रीय सदस्य भएका उनले विसं २०५२ माघदेखि भूमिगत राजनीतिसमेत गरेका थिए । उनले विसं २०५८ मा तत्कालीन नेकपा(मोआवादी)को तर्फबाट गठन गरिएको तीन सदस्यीय वार्ता टोलीमा रही शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए । तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) को हेटौँडा महाधिवेशनबाट पोलिटब्युरो सदस्य बनेका उनले २०६९ साउनदेखि एकीकृत नेकपा (माओवादी) को स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गरे ।
मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले गुर्जेभञ्ज्याङ,मानेभञ्ज्याङ हुँदै दुप्चेश्वर जोड्ने सडकको शिलान्यास
नेपालीलाइ हङकङ भिसा खुला गर्न परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सकारात्मक
प्रचण्डकी नातिनी स्मिता दाहाल र गायक सरोज ओलीको स्वरमा नयाँ गीत, कार्टुन क्रुको डान्स (भिडियोसहित)
नुवाकोट, फागुन-बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले गुर्जेभञ्ज्याङ,मानेभञ्ज्याङ हुँदै...
काठमाडौं(जस) – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)हङकङले नेपालीलाइ हङकङ...
काठमाडौं(जस)– गायिका स्मिता दाहाल र गायक सरोज ओलीको...
आज महाशिवरात्रि, देशैभर यसरी मनाइँदैं
काठमाडौं(जस)–प्रत्येक वर्ष फागुन कृष्ण चतुर्दशी मध्यरातमा परेका दिन...
आज सेना दिवस : टुँडिखेलमा कवाज प्रदर्शन हुने
काठमाडौँ(जस)– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रमुख सुरक्षा अङ्ग...
रेडक्रसका पदाधिकारीमाथि कानूनी कारवाही अघि बढाउन निर्देशन
काठमाडौँ(जस)–प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आर्थिक अनियमितता...
एनआरएनए हङकङद्धारा हङकङमा रोजगारीका लागि भिसा खुलाउन माग
काठमाडौं(जस)– गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) हङकङले नेपालीका लागि हङकङमा...
७० करोड कमिसन प्रकरण : सञ्चारमन्त्रीको राजीनामादेखि अरु के–के भयो ?
काठमाडौँ(जस)– ७० करोड कमिसन प्रकरणमा मुछिएका सञ्चार तथा...
© 2019 Janasawal.com All Rights Reserved. Site By : Al Mawadah Information Technology सम्पादक : जनसवाल